Mkpebi Asụsụ na Asụsụ Grammar With Grammarly | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị na-agụ Martech Zone nwa oge, ịmara na m nwere ike iji obere enyemaka na ngalaba nkọwa. Ọ bụghị na ọ gbasaghị m banyere mkpoputa na ụtọ asụsụ, m na-eme. Nsogbu ahụ bụ nke ọtụtụ mgbe. Kemgbe ọtụtụ afọ, m na-ede ma na-ebipụta akụkọ anyị na ngwa ngwa. Ha anaghị agafe ọtụtụ usoro nnwapụta-a nyochara ha, dee ha, bipụtara ha.
N’ụzọ dị mwute, nke ahụ wutere m ihere dịka m bipụtara ụfọdụ ịkwa emo asusu asusu karịrị afọ. M na ọbụna gwara ụfọdụ n'ime anyị copywriters banyere inwe ha na retainer iji nyochaa m posts kwa ụbọchị. Agbanyeghị, achọghị m ichere ibipụta ka m tinyere ya. Ghara ikwu eziokwu na enwere m ike ịmasị etu ndụmọdụ ha si gbanwee ụda ọrụ m. Ezigbo ihe mere m ji zere ịga ebe ndezi. Ọzọkwa, m dee ọtụtụ isiokwu na m kwesịrị iji melite iwu m nke asụsụ Bekee.
Ole Gtọ asusu na Nsụpe Ozi Ndị Mmadụ Na-eme Ntaneti?
Abụghị m naanị otu! Ramtọ asụsụ nyochaa ihe karịrị otu ijeri okwu Nyocha site na ngwa ngwa ewu ewu ha na-ewu ewu n'ime otu ọnwa. Nke a bụ ihe ha hụrụ:
Ndi mmadu meghariri mmeghari okwu 39 n'ime okwu 100 na mgbasa ozi mgbasa ozi. Ozi ịntanetị na-eso 13 njehie kwa 100 okwu na blog posts ndị kasị ala na 6.5 emehie kwa 100 okwu.
Ndi mmadu nwere okpukpu ato karie ka ha gha aghahie na mgbasa ozi mgbasa ozi karie ka anyi di n’ime akwukwo ozo. Ana m eche na ụfọdụ n'ime ihe a nwere njedebe nke Twitter (enweghị mgbanwe) na ụdị mkparịta ụka nke mgbasa ozi.
Nnụnụ ndị izizi na-ede ihe n’agbata elekere anọ nke ụtụtụ na elekere asatọ nke ụtụtụ mere ka 4% peepe mpe karịa ikwiikwii abalị na-ede n’etiti 00:8 nke ehihie na 00:18.2 nke ụtụtụ. (Uh-oh)
Gini bu isi okwu asusu na mkpoputa okwu ndi mmadu na eme na ntaneti?
Idozi Apostrophe (eg, ka anyi mee vs. ahapụ)
oke vs. Iji
-adị kwa ụbọchị vs. Kwa ụbọchị
Ebe ahụ vs. ha
karịa vs. mgbe ahụ
Might nwere ike ịhụ ọganihu na mpaghara a, ebe m tinyere ego na akwụkwọ ikike kwa afọ Grammarly, a ọrụ na-na-akpọkarị ndị kasị mma n'ụwa ụtọ asụsụ ụtọ Checker. Emechara na ndọtị ihe nchọgharị, enwere m ike ide ngwa ngwa dezie njehie na-ahapụghị onye editọ m.
Grammarly: Usoro Ntuziaka kacha mma na Spelling Check Platform
Grammarly bụ ọrụ m nwere ike iji ya na ikpo okwu ma ọ bụ ngwanrọ ọ bụla. Lee ụfọdụ ihe atụ:
Asụsụ ederede Asụsụ - Onye nchịkọta akụkọ Grammarly dị mma, na nyocha okwu, nyocha asụsụ, nyocha akwụkwọ ịkpọtụrụ, na-atụ aro ndị na-ege ntị, nyocha akwụkwọ, ịgụ akwụkwọ, nchọpụta ụda, ebumnuche, isi okwu, ebumnuche, aro okwu, nnọchi mara mma, ọnụ ọgụgụ okwu, ogologo okwu, na ndị ọzọ.
Grammarly Desktop Ngwa - Grammarly nwere ngwa eji arụ ọrụ nke nwere ike ịgba ọsọ na sistemụ arụmọrụ ọ bụla. Ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ dabeere na ebe ị nwere ike ijigide ebe nchekwa akwụkwọ gị niile.
Ramtọ asụsụ maka iPad - Grammarly nwere a standalone ngwa nke nwere ike na-agba ọsọ na iPad.
Mgbakwunye Nchọgharị Grammarly - Grammarly nwere ihe nchọgharị dị egwu. Ana m eji ndọtị Safari ugbu a n'ime WordPress 'Gutenberg nchịkọta akụkọ ugbu a n'isiokwu a. Ibe weebụ ọ bụla nwere mpaghara ederede na-enyere Grammarly aka na-akpaghị aka iji nyere gị aka. Nke kachasị mma, ịnwere ike ịnweta ọrụ bụ isi na enweghị ọnụ!
Asụsụ Grammarly Office Add-In - Grammarly nwere ulo oru tinye-in maka Windows ma obu Mac.
Mbadamba ramtọ asụsụ - Ọ bụrụ n ’ịnọ na ngwaọrụ mkpanaka, ịnwere ike iwunye ma jiri kiiboodu nyere gị aka iji ekwentị gị.
Azụmaahịa ramtọ asụsụ - Ndi ụlọ ọrụ gị nwere usoro ịkọwapụta ụdị akọwapụtara mgbe ị na-ede ihe? Grammarly Business na-enyere gị aka iduzi onye ọ bụla n’ime ụlọ ọrụ gị ịgbaso ụkpụrụ gị.
Bido Gtọ asụsụ Na-akwụghị Onwe Gị
Etu aga-esi lelee ụtọ asụsụ na nsụpe okwu na asụsụ Grammarly
Iji Grammarly eme ihe di mfe. Na mpaghara ederede ị na-arụ ọrụ na ya, ị ga-ahụ nhịahụ nsụgharị na ụtọ asụsụ. Pịa akara ngosi nke asụsụ Grammarly na elu pop na-edezi ihe omimi miri emi nke nwere ozi niile ịchọrọ iji meziwanye nnomi gị.
Nke a bụ nnukwu vidiyo banyere etu Grammarly si arụ ọrụ:
Ọ bụrụ na nke ahụ ezughị ezu maka gị, kedụ maka email kwa izu iji mee ka ị mara etu ị si arụ ọrụ yana ndị ọrụ Grammarly ndị ọzọ? Ee, ha na-eziga otu! Ma mba, anaghị m ekerịta nke m.
Mara: Ana m eji nke m Grammarly Mgbakwunye njikọ na post a.
Tags: na-atụ aro ndị na-ege ntịidehie okwu gburugburu yaedezi ngwaọrụederede ederedenjehie kwa 100 okwuformality achọpụtaziihe mgbaru ọsọgrammarụtọ asụsụ ngwaụtọ asụsụụtọ asụsụnlele ụtọleụtọ asụsụ ngwa ngwaụtọ asụsụnzubemmehiemkpokọta isigilele plagiarismakara edemedeoguguspell-nleleokwu anwansịmkpoputamkpoputa ngwamkpope Checkermkpoputa ngwá ọrụnchọpụta ụdaokwuokwu bara uruokwu njehiearo okwu
Jornaya rụọ ọrụ: Nyochaa na Ahịa na Ahụhụ Maka Akụrụngwa-Ndụ
Ana m anwale ya ugbu a. Enwere atụmatụ na-agwa ya ka ọ hapụ ihe odide HTML na doc? Ugbu a, mgbe na-ede maka web, M nnọọ format ka m na-aga na nri ụtọ asụsụ na-enwe dabara, karịsịa mgbe Ọ na-aka na anatara.
Na, grr, olee mgbe ọ ga-akwado Google Drive?
Ma ọ bụghị ya, ọ dị egwu.
Google mbanye ga-adị mma mma! Naanị m na-esi na Grammarly gbapụta ya na akwụkwọ m.